अब मात्र एक हजारमा कोरोना परीक्षण गरिने, नतिजा केही मिनेटमै आउने – Online Saptarangi
अब मात्र एक हजारमा कोरोना परीक्षण गरिने, नतिजा केही मिनेटमै आउने
October 14, 2020 Prakash WaibaLeaveaComment on अब मात्र एक हजारमा कोरोना परीक्षण गरिने, नतिजा केही मिनेटमै आउने
काठमाडौँ, २८ असोज । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एन्टिजेनमा आधारित कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० परीक्षण सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ । यसले कोरोनाको परीक्षण तत्कालै गराउन सहयोग पुुग्नेछ । ‘नेसनल टेस्टिङ गाइडलाइन फर कोभिड–१९’ मा चौथो संशोधन गर्दैै यो विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्न लागिएको हो । यसको अधिकतम मूल्य हाल एक हजार रुपियाँ तोकिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा।डा।जागेश्वर गौतमले एन्टिजेनको किट तथा रिएजेन्ट स्वास्थ्य सेवा विभागबाट स्वीकृति प्राप्त हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले अनुमति दिएको प्रयोगशालाले मात्रै यो परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । प्रवक्ता गौतमले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले तोके बमोजिमको ‘बायोसेफ्टी क्याबिनेट’ तथा अन्य सुरक्षा विधि पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । गोरापत्र दैनिकमा खबर छ ।
परीक्षणमा पोजेटिभ आएमा परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, सम्बन्धित जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालय र व्यक्ति स्वयंलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ भने रिपोर्ट नेगेटिभ आएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्रै जानकारी गर्नुपर्नेछ । एन्टिजेनको नतिजा केही मिनेटमै आउने गर्छ ।
काठमाडौंमा होटलको रुममै बसेर हुन्थ्यो यस्तो धन्दा: थाहा पाउदा सबै च’कित !
काठमाडौं उपत्यकामा थपिए १४०३ कोरोना संक्रमित
प्रहरीले खोजेपछि र्‍यापर भिटेनले चाले यस्तो कदम (हेर्नुहोस्)
October 30, 2020 Prakash Waiba
बुटवलमा भेटिएका १०० भन्दा बढी आवाज निकाल्ने मदन ! रबी लामिछानेको क्यारिकेचर गर्दै, सबैलाई चकित पारे
October 18, 2020 October 18, 2020 Prakash Waiba
“दलालि को माध्यम बाट मगाको यौ’न कर्मी आफ्नै श्रीमती परेपछि”
November 10, 2020 Prakash Waiba